Soomaaliya Oo Dalbatay $80 million Oo Wax Looga Qabto Fatahaadaha – Goobjoog News
Qaramada Midoobey iyo dowladda Soomaaliya ayaa qeylo-dhaan u diray beesha caalamka, iyaga oo codsaday lacag dhan $80 million oo deg-deg ah, si wax looga qabto fatahaadda ka jira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
OCHA waxaa ay sheegeysaa in roobab da’ay in ay sababeen fatahaadahii ugu badneyd muddo 30 sano ah. Fatahaadaha waxaa ay geysteen khasaare naf iyo maal leh, barakac, burbur ku yimid kaabayaasha dhaqaale taas oo la sheegayo inay uga sii darday dhibaatada ka jirta Soomaaliya.
Dadka wax ku noqday waxaa ay heys’adda OCHA ku qiyaastay 750,000 halka dadka barakacaaysha ay gaarayaan ilaa 229,000 oo qof.
Hey’adaha ka shaqeeya arrimaha banii’aadnimada waxaa ay sheegayaan in aaney isku halleyn karin lacagtii $1.5 billion ee laga sugayey beesha caalamka sanadkan.
Peter de Clercq, oo UNka u qaabilsan arrimaha banii’aadnimada waxaa uu sheegayaa in loo baahanyahay xal waara iyo u adkeysi la xiriira arrimaha isbadalka hawada iyo cimillada.